Corsair weputara Airbus A330neo nke mbụ ya
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Corsair weputara Airbus A330neo nke mbụ ya
Corsair na-emezu atụmatụ ya ka ọ bụrụ onye ọrụ A330 niile
Corsair ga - erite uru site na ngwọta na - efu ego na gburugburu ebe obibi
Aircraftgbọ elu ahụ nwere oche 352 na nhazi klas atọ
Corsair na-arụ ọrụ ugbua ụgbọ elu Airbus nke ụgbọ elu A330 Family ise
Corsair ewerela nnyefe nke mbụ A330-900, na mgbazinye ego site na Avolon, iji sonye n'ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu French.
Site na ịhọrọ mkpokọta ise Airbus A330neos, Corsair na-eme atụmatụ ya ka ọ bụrụ onye ọrụ A330 niile. Ekele maka teknụzụ kachasị ọhụrụ nke A330neo, Corsair ga-erite uru site na ngwọta na-arụ ọrụ dị oke ọnụ na gburugburu ebe obibi, ma na-enye ndị njem ezigbo ụkpụrụ nkasi obi kachasị mma n'ụlọ ezumike dị na klaasị ya.
Aircraftgbọ elu ahụ gosipụtara oche 352 na nhazi klas atọ, na-enye nkasi obi na akụrụngwa niile nke ọdụ ụgbọ elu 'Airspace' nke Airbus, gụnyere njem njem njem ụgbọ elu (IFE) na njikọta WiFi zuru ezu n'ime ụlọ ahụ. .
The A330neo bụ nke Rolls-Royce ji ọhụụ ọhụụ Trent 7000. The Corsair ugbo elu ga-abụ nke mbụ A330neo iji gosipụta mmụba kachasị dị elu nke 251 tonnes. Ike a ga - enye ụgbọelu ohere ife njem ogologo oge ruo 13,400 kilomita (7,200nm) ma ọ bụ rite uru site na tọn iri ọzọ ịkwụ ụgwọ n'ụgbọ.
The A330neo bụ ọgbọ ọhụrụ na ụgbọ elu nke nọchiri anya ezinụlọ A330ceo zuru oke. Nakwa nhọrọ engine ọhụrụ, ụgbọ elu ahụ na-erite uru site n'ọtụtụ imepụta ihe, gụnyere mmezi aerodynamic na nku ọhụrụ na nku nku na-esonye na-enye 25% mmanụ ọkụ na CO2 mbenata.
Corsair, nke na-arụ ọrụ ugbua ụgbọ elu Airbus nke ụgbọ elu A330 Family ise, ghọrọ onye otu nke Airbus Skywise 'Open Data Platform' na 2020, si otú a na-erite uru site na ọtụtụ ọrụ ndị dabeere na Skywise, dị ka ezigbo oge na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri nyocha. ikike (nlekota ahụike nke ụgbọ elu), nyocha a pụrụ ịdabere na mmezi amụma.
Ọrụ njem na njem nlegharị anya jụrụ 3.8 percent na February 2021
Mmemme kacha mma 2021 na-akpọkarị
Ozi Njem na Germany